Hotels taariikhi In Europe Oo Sida loo Waxaa Hel | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Hotels taariikhi In Europe Oo Sida loo Waxaa Hel
hotels taariikhiga ah ee Europe yihiin ma ah aragti naadir ah, gaar ahaan magaalooyinka waa weyn oo leh taariikh qani ah. Paris, London, Rome, Munich, Vienna - dhammaan magaalooyinka waxay leeyihiin meelo qurxoon in ay bixiyaan. dalxiisayaasha kuwaas oo qaar ka mid ah jamasho raaxo dhaqanka ku yeelan doonin dhibaatooyinka loo helo meesha ay joogaan in Europe. Qaybta ugu wanaagsan ee ku saabsan waa in aad u safri kartaa oo dhan magaalooyinkaas tareen, on miisaaniyad. Halkan waxa ku jira shan hotels taariikhiga ah ee Europe iyo top sidaad u tagi karto tareen:
1. Waxaan ku bilaabaynaa liiska Hotels taariikhi ah la noo – Ritz The, Paris
No liiska hoteelada taariikhiga ah ee Europe top noqon lahaa dhamaystiran oo aan Paris. Mid ka mid ah xabbad luul ah warshadaha hoteelada ay u taagan tahay soo baxay: Ritz The. hotel The faanaa taariikh hodan ah oo gudaha ah oo raaxo leh si ay u tagaan waxaa la. Waxaa la aasaasay 1898, iyo xataa markaas ahaa munaaraddii ka mid ah raaxada.
Ritz The dabiici ahayd doorasho caan ah oo xubnaha bulshada sare Yurub. Qaar ka mid ah guests ay caan ku ahaayeen Duke iyo Duchess of Windsor, Coco Chanel, iyo Ernest Hemingway, kuwo kale. Haddii aad rabto si ay u sahamiyaan oo ay soo jiidasho leh taariikhda, inaad Paris qaadan kartaa tareenka ka magaalooyinka kale ee waaweyn ee Yurub sida London, Rome, Amsterdam, ama Brussels.
Belmond Cadogan Hotel ee London waxaa loo arkaa hotel Olimpico a, laakiin waxa uu leeyahay muddo dheer ah oo xiiso badan taariikhda. Qaar ka mid ah dhihi lahaa waxa uu ahaa xataa riwaayado waqtiyada, sida Oscar Wilde waxaa sugaya xiray waxaa ku jira 1895. Cadogan waxay leedahay 64 Qolalka iyo Edwardian cajiib ah jawi. Waa guri taariikhi ah, oo waxaa lagu hayaa wax badan oo ka mid ah dabeecadda gaarka ah ee xilligii. Haddii aad qaadato talo hore, aad si fudud u socdaaleen ka Paris si ay u London tareen.
Marka ay timaado in hotels taariikhiga ah ee Europe, Albergo del Sole al Pantheon ee Rome qaadataa hawlan. Waa mid ka mid ah hoteelada ugu da'da weyn aduunka, asaasay 1467! Rooms in iska eafiya iskana ah karnoo Fiican, buuxi la sariiraha Renaissance-style iyo frescos 17-qarnigii sida decoration. Waxa aanu aad u hesho wax wanaagsan ama wax ka badan ee taariikhiga badan in. bonus kale waa in u safraya Rome waa wax fudud oo tareen, gaar ahaan laga soo bilaabo oo weyn oo kale magaalooyinka Talyaani.
Torbrau ayaa ku bilaabatay sidii meel dadka safarka ah ka daalin ka Salzburg inay nastaan ​​oo a biir wanaagsan. Waxaa la hawlgala muddo ka badan 500 sano, oo waxaa la helay in ay dayactirka casriga ah ee '90s. Torbrau ayaa ugu cadcad ka mid ah safarrada ganacsiga iyo dalxiisayaasha yaa ka ah rabto soo jiidasho waayo-aragnimo hotel taariikhi ah. Haddii aad tahay booqashada Munich tareen ka Berlin, Vienna ama magaalooyinka kale ee Yurub, aad qorshaynayso laga yaabaa inuu sii joogo Torbrau.
The Grand Hotel Wien dhisay 1870, oo qaatay kaliya qadar gaaban sida deganaansho gaarka loo leeyahay. Waa ugu da'da weyn oo ka mid ah "Ring Hotels" agagaarka Opera oo ka mid ah Ringstrasse in Vienna. Ilaa hadda sida taariikhda u dhaco, Hotelka ay arkeen ay share of farax iyo jabka labada. Waxay ahayd hortegi lahaa ee arrin Mayerling taasoo ah arrin naxdin leh, iyadoo dhimashada Prince Austria Crown ee Rudolf iyo lover, Baroness Marie Vetsera. Haddii sheekada ayaa aad xiiso badan, waad ku dari karaysaa Grand in ay liiska hoteelada taariikhiga ah ee Europe in ay booqdaan. Head in Vienna tareen ka Munich, la stop ah ee Salzburg.
Booqashada Hotels Taariikhda Yurub by Kooban tareenka!
Ma waxaad raadineysaa in ay soo booqdaan qaar ka mid ah hoteelada taariikhiga ah ee Europe ugu xiisaha badan? Qorshee safar xagga magaalooyinka waaweyn ee Yurub oo jartaan tikidhka tareenka inuu halkaas oo aad ka heli!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit ah la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fhistoric-hotels-europe%2F%3Flang%3Dso - (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#hotel #hotels #Vienna europetravel Munich trainjourney talooyin tareenka tareen safarka travelaustria travelfrance travelgermany travelparis travelrome